Qaybtii Labaad Ee Tariikhda kacaankii Xukumi Jiray Dalka 21-Sano
Friday October 22, 2021 - 09:01:45
Siyaasadihii kale ee ay ku muujinayeen in ay nidaamkii hore ka duwan yihiin, Golihii Sare ee Kacaanku waxay sameeyeen Gole Wasiirro ah oo rayid ah, oo lagu xulay aqoon iyo karti, kuwaas oo watey shahaadooyin jaamacadeed.
Askariga keli ah ee ka tirsanaa wuxuu ahaa Qorsheel oo laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha, Waxaana lagu dhawaaqay in shaqaalaha dawladda lagu dooran doono "Maxaad taqaannaa?” ee aan lagu salayn doonin "yaad taqaannaa”.
Sidaana lagu ka la hormaro aqoon ee aan eex iyo qabiil iyo laaluush jago lagu helin , In badan oo ka mid ah maamulkii hore ee ‘rayidka’ ahaa waxaa loo direy dhaqan celin iyo tababar ciidan (Xalane).
Saddex bilood kaddib afgembigii waxaa la aas-aasay Nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed (National Security Service) oo uu madax u ahaa xubin ka tirsan Golaha Sare ee Kacaanka, Axmed Saleebaan Cabdilaahi (Ina Dafle; waxaa soddog u ahaa Maxamed Siyaad Barre).
Sidaas oo kale, waxaa la sameeyey Maxkamadda Sare ee Qaranka (National Security Court), Maxkamaddan waxaa loogu talogalay in la soo taago cid allaale iyo ciddii lagu eedeeyo in ay halis ku tahay midnimada, nabadda iyo madaxbannaanida dalka, waxaana garsooreyaal ka ahaa xubno ka tirsan Golihii Sare ee Kacaanka (askar aan aqoon u lahayn hawshan).
Waxyaalihii ugu horreeyey ee Kacaanku qabtay waxaa ka mid ahaa in la la xisaabtamo shaqaalihii dalwadda heer kasta oo ay lahaayeen, Hawlaha xisaabinta waxaa masuul ka ahaa Gaashaanle Dhexe Maxamud Mire, oo ka mid ahaa saraakiishii bilayska ee Golihii Sare ee Kacaanka.
Waa barnaamijkii ku caan baxay "xisaabi xil ma leh”. Dad badan oo lagu eedeeyey in ay lunsadeen hantidii waddanka ayaa la ciqaabay. Golaha Sare ee Kacaanku taageero badan ayuu shacabka kaga helay arrintan.
Kacaanka hortiis waxaa waddanka wax lagu qori jirey oo xafiisyada dawladda ka shaqayn jirey, waxna lagu baran jirey afaf ka la geddisan (Carabi, Talyaani, Ingiriisi).
Waxaana lagu heshiin waayey fartii Af-Soomaaliga lagu qori lahaa, oo xisbiyada qaar waxay rabeen in Laatiin lagu qoro, qaar kale waxay taageerayeen Carabiga, halka qaybo kale rabeen in far Soomaali qortay la adeegsado.
Farta xiligaas Soomaalidu qortay waxaa ka mid ahaa Cusmaaniyada oo uu qoray Yaasiin Cismaan Keenadiid, iyo fartii Kaddariya oo uu qoray Xuseen Sheekh Axmed Kaddare.